Boliska qaran oo hanti dheeraad ah ka dalbaday dowladda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Madaxa hey'adda boliska Dan Eliasson. Foto: Janerik Henriksson / TT.
Boliska qaran oo hanti dheeraad ah ka dalbaday dowladda
La daabacay måndag 25 januari 2016 kl 10.42
Korarka qatarta argagaxisada, ququlka qaxootiga iyo kontoroolka xaduudaha oo kor u qaaday baahida hey'adda boliska u qabto maagelin dheeraad ah.
Hey’adda boliska ayaa dalbanaysa in loo kordhiyo hantida si boliis dheerad ah loo shaqaaleeyo.
Waxaa loo baahan yahay in la shaqaaleeyo ciimado boliis oo gaaraya 1500 illaa 2500 iyo weliba 1600 oo ah shaqaale rayid ah illaa iyo sannadka 2020.
Madaxa hey’adda boliska qaranka Dan Eliansson ayaa sheegay haddii aan sidaas la sameynin ay qasab ka dhigeyso in hoos loo dhigo howlaha hey’adda boliiska ay qabto.
– tusaale in aan yareyno joogitaankeena xaafadaha dhanka bulsho iyo dhaqaalebe liita. Tasna waxay keenaysaa saameyn ah nabadgeliyo la’aan. Sidoo kale waxaa qasab noqoneysa in aan hoos u dhigno ahmiyadda aan siino la dagaalanka denbiyada daroogada iyo denbiyada ka dhaca wadooyinka, ma u malaynayo in ay middas ay aqbali karaan shacabka Sweden, sidas daraadeed waxaa looga fadhiyaa dowladda iyo baarlamaanka in ay u dhago nuglaadan dalabkeena, ayuu yeri.
Waxaa kordhay qarashka hey’adda boliiska uga baxa tusaale howl-galada qaran ee ka hortagga argagaxisada, kontoroolka xaduudaha waddanka, dal ka masaafurinta dadka degnaanshaha lo diiday iyo weliba illaalinta amniga iyo kalo denbeyta xaruumaha qaxootiga deganyahiin.
– Waxaa jira xeriyo badan oo qaxooti oo dadka ku nool ay waqti dheer ku suganyahiin xaalado dhib badan, sida xeryahan oo aad ciriir u ah, taas oo badanaa keenta gacan ka hadal iyo rabshado. Waxay nagu qasabtaa in joogto u joogno xeriyaha qaxootiga si aan amniga iyo kalo denbeyta u illaalino, ayuu yeri Dan Eliasson madaxa hey’adda boliiska qaranka.
Qoral boliska u gudbiyey wasaaradda caddaaladda ayaa waxaa ku xusan in gaar ahaan xaaladda qaxootiga ay culayska shaqo ku kordhisay boliska, sida howlada boliiska ka wado xaduudaha iyo weliba howl-galada lagu sugayo amniga iyo kalo denbeyta dalka.
Si hadaba howl-galada muhiimka ah loogu qasbanaanin in hoos loo dhigo heerkooda hammad waxaa lagoma maarmaan ah in la xoojiyo hantida la siiyo hey'adda boliska ayaa lagu yeri qoral loo gudbiyey wasaaradda cadaaladda.
Korarka qatarta argagaxisada ayaa sidoo kale kor u qaadey baahida qarash ee boliska, sida in la helo qarash lagu howl-geliyo bolis dheerad ah iyo weliba qarash lagu dhiso xarumo cusub, qalab, gaadiid iyo tababaro dheeraad ah.
Hey’adda boliska ayaa saadaalineysa in ay u baahantahay hanti u dhiganta 1,8-2,8 milyaard inta u dhaxeysa sannadka 2017-2019.
Guddomiyaha iskaashatada shaqaalaha boliska Lena Nitz ayaa iyadu aaminsan in hey’adda boliska la daahday dalabkeeda ah hanti dheeraad.
– Waqti dheer maalgelinta way ku yareyd hey’adda boliska. Runtii xaalkaan in aan ku jirna ma aheyn, ayey tiri.
Wasiirka arrimaha guddaha Anders Ygeman ayaa dalabka boliska si maldahan u soo dhaweeyey.
– Miyaa jiraa kontorool xaduud oo waddanka ka jirin tan iyo sannadkii 1994, miyyey ka feejignaanta argagaxisada mareysaa heerkii ugu sareeyey, haa, taasna waxay lagama maarmaan ka dhigeysaa in boliska hantada loo kordhiyo, ayuu yeri Anders Ygeman
Rikspolischefen kräver mer poliser